Sanganasa mahafinaritra natolotray ny ekipanay ho an'ny mpanjifanay!
S- MANOKANA manokana fandresena-fandresena
Mifantoha amin'ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra ary serivisy ho an'ny tetik'asa famindrana hafanana.
Mametraha fifandraisana akaiky amin'ny fiaraha-miasa amin'i Shanghai Jiao Tong University, University of Technology South China, University of Ocean Ocean, University of Science and Technology, China University, Harbin University of Commerce.
Manana patanty famoronana nasionaly iray sy patanty modely ilaina 22.
Meteza ho fotodrafitrasa sy fikarohana ao amin'ny Oniversiten'i Technology South China amin'ny famindrana hafanana sy fitsitsiana angovo.
Mandray anjara amin'ny famolavolana fenitra 6 any an-toerana any Shanghai ho
➢ "Ireo mpitrandraka etona entona miompana amin'ny angovo dia mametra ny sandan'ny sandan'ny angovo sy ny fahombiazan'ny angovo"
➢ "Fanjifana herinaratra fitehirizana mangatsiaka isaky ny singa iray sanda voafetra sy laharana fahombiazan'ny angovo"
➢ "Rafitra fenitra fitantanana angovo orinasa"
➢ "Fitsipika fiarovana fiarovana famokarana mangatsiaka"
➢ "fenitra mahomby amin'ny angovo mikatona mihidy"
➢ "Ny fomban'ny famolavolana pultrusion ary ny fahombiazan'ny angovo famatsiana angovo famatsiam-bola"
Mandraisa anjara amin'ny fenitra "Fomba entina miorina amin'ny rivotra lavitra ho an'ny rivotra" mekanika fanadinana ho an'ny fantsom-panafody "ho an'ny Komity Teknika ho an'ny fanamafisam-peo.
P- Matoky PROFESSIONAL
➢ Manana ekipa injeniera R&D tena tsara ary manamboatra mpiasa mahay manana traikefa an-taonany maro.
➢ Manana milina famokarana sy fanandramana mandroso toy ny foibe fanodinana mandeha ho azy, milina fitiliana ny fiatraikany, sns.
➢ Tompony ny tsipika famokarana fantsona mandeha ho azy tena mandroso indrindra, ary ny tsipika fanenjana fantsona.
➢ Manana lisansa famolavolana sy fanamboarana D1, D2 anao manokana.
Certificate Taratasy fanamarinana rafitra fitantanana ISO9001-2015.
➢ Mandehana fanamarinana CTI.
➢ Faham-pahefana fametrahana tsindry GC2 anao manokana.
➢ Mamolavola rindrambaiko fandinihana condenser evaporative miaraka amin'ny oniversite Shanghai Ocean, ary homena mari-pankasitrahana fisoratana anarana lozisialy ho an'ny NCAC.
➢ Orinasa fiompiana goavambe sy haitao Shanghai.
Enterprise Orinasa teknolojia avo lenta any Shanghai.
➢ Famoronana siansa sy teknolojia any Shanghai - Loka faharoa.
Progress Fandrosoana siansa sy teknolojia any Shanghai- Loka fahatelo.
Class Kilasy AAA momba ny fifanarahana Shanghai.
➢ Mpikambana ao amin'ny Association Conservation Energy Shanghai.
Member Mpikambana ao amin'ny Fikambanana orinasa sy siansa sy teknolojia any Shanghai.
➢ Mpikambana ao amin'ny Fikambanana Shanghai ho an'ny fampiroboroboana ny zava-bita siansa sy teknolojia.
L- MITARIKA ny fampandrosoana ny indostria
➢ Ny tranga voalohany tao amin'ny tetikasa Shanghai Gaoqiao Sinopec nanapotika ny catalytic.
➢ Tetikasa fananganana etona etona etona etona an'ny tranga voalohany an'ny CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).
➢ Ny tranga voalohany misy ny tetikasa solika dioxide solifara WESTERN MINING voalohany ao amin'ny firenena.
➢ Ny tranga voalohany misy ny firenena ny tetikasa XIN FU biolojika etil acetate mangatsiaka.
01 Serivisy mialoha ny varotra
- Fanohanana ny fanadihadiana sy ny consulting. 15 taona pump pump traikefa ara-teknika.
- Serivisy teknika injeniera mpivarotra iray.
- Hot-tsipika fanompoana misy amin'ny 24 ora, namaly tao 8h.
02 Aorian'ny fanompoana
- Fanombanana fitaovana fanofanana ara-teknika.
- Fametrahana sy fanesorana ny troubleshoot.
- Fanavaozana sy fanatsarana ny fikojakojana.
- Fiantohana herintaona. Omeo fanampiana ara-teknika amin'ny fiainana manontolo ny vokatra.
- Ataovy izay hifandraisana amin'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainana rehetra, mahazoa valiny amin'ny fampiasana ireo fitaovana ary ataovy tonga lafatra hatrany ny kalitaon'ny vokatra.